Adeegyada Kaydinta daruuraha ugu Fiican ee Daaqadaha | Wararka Daaqadaha
Adeegyada Kaydinta daruuraha ugu Fiican ee Daaqadaha
Qolka Ignatius | | Cloud
Xitaa haddii aadan aqoon, haddii aad isticmaasho Gmail, Apple ama Microsoft account, xisaabaadka leh meel kaydinta daruuraha, meel aad u yar oo xaddidan, laakiin waad haysataa. In muddo ah hadda, shirkado waaweyn ayaa doortay adeeggan oo kale kaas oo noo ogolaanaya inaan kaydiyo xogta iyo nuqullada kaydinta oo leh ammaan guud.
Suuqa waxaan ka heli karnaa, marka lagu daro saddexda waaweyn ee aan soo sheegay, tiro badan oo beddelaad ah, beddelaad sax ah oo sax ah haddii aynaan raadin is-dhexgalka qumman ee goobaha kale iyo gaar ahaan codsiyada. Haddii aad rabto inaad ogaato waxa ugu fiican dhufto ee kaydinta daruuraha Waxaan kugu martiqaadayaa inaad akhriska sii wadato.
1 Waa maxay adeegga kaydinta daruuraha?
6 qaraniga ahee
7 Midkee ka jaban?
Waa maxay adeegga kaydinta daruuraha?
Kahor intaanan ka hadlin meelaha kala duwan ee kaydinta daruuraha, waa inaan fahannaa waxa daruurtu tahay: waa kheyraad aad awooddo meel fog ka gal online, ama bilaash ama lacag.
Goobaha kaydinta waxay la mid yihiin kaydinta alaabta guriga, laakiin halkii laga buuxin lahaa sanduuqyo, waxaad ku buuxinaysaa xisaabaadka kaydinta daruuraha faylashaada.
Goobta dhabta ah ee faylashaada inta badan waxay ku taalaa xarunta xogta, server-ka, hard drive-ka ama wadwaha adag ee gobolka aad iyo aad nooga fog.
OneDrive waa doorasho weyn qof kasta oo si joogto ah u isticmaal Windows iyo codsiyada xafiiska labadaba in shirkadu noo diyaariso.
Waxay na siisaa is dhexgalka saxda ah ee Windows iyo inta kale ee codsiyada Xafiiska, oo ay ku jiraan maamulaha iimaylka Outlook iyo xagga shaqooyinka, Waxay leedahay wax yar ama waxba inay ka masayrto inta kale ee dhufto ee.
Noo ogolaada la wadaag faylasha dadka kale, xitaa haddii aysan ahayn isticmaalayaasha OneDrive (dejinta oggolaanshaha u dhigma), awoodda wax looga beddelo faylasha internetka iyada oo aan la soo dejin waa kooxdayada.
Haddii aad leedahay xisaab Microsoft, waxaad haysataa 5 GB oo boos ah oo bilaash ah, meel aan wax yar ama waxba ku qaban karin. Laakin, lacag yar, waxaad ku balaarin kartaa booskaaga ilaa 100 GB.
Haddii aad isticmaasho Microsoft 365 (oo hore loo yiqiin Office 365) meesha kaydinta daruurtu waa 1TB, meel bannaan oo aan sidoo kale ballaarin karno haddii ay hoos u dhacdo annaga oo bixinno wax yar oo dheeraad ah.
El cabirka faylka ugu badan in aan ku shubi karno goobtan waa 250 GB. Waxa ay haysataa codsi macruufka ah iyo Android.
Google Drive waa goobta adduunka oo dhan laga isticmaalo maadaama ay na siisay is dhexgalka saxda ah ee Android iyo adeeg kasta oo kale oo Google ah, sida Gmail. Si bilaash ah, waxay na siisaa 15 GB oo meel wax lagu kaydiyo.
Waxay haysaa codsi loogu talagalay Windows, waa codsi ku rakiban kombuyuutarkeena sida hal unug kaydinta oo kale waxayna noo ogolanaysaa inaan doorano faylalka iyo hagayaasha aan rabno inaan ku soo dejino kombayutarkeena, anagoon haysanin nuqul sax ah dhamaan waxa ku jira kombayutarkeena.
Isku xirka shabakadda Ma aha mid ka mid ah kuwa ugu fiican suuqa, cilad lagu kabo isticmaalka codsiga Windows iyo macOS. Drive sidoo kale waxa uu dhexgeliyaa raadinta awooda badan ee Google iyo tignoolajiyada sirdoonka macmalka ah, malaha mid ka mid ah kuwa aduunka ugu fiican.
La xal in Apple ay siiso dhammaan isticmaalayaasha Windows si loo kaydiyo faylasha daruuraha waxa loo yaqaan iCloud. Madalkan, oo bixisa 5 GB oo boos bilaash ah dhammaan isticmaalayaasha haysta aqoonsiga Apple, waxaana lagu heli karaa qaab codsi ah oo aan ka soo dejisan karno dukaanka Microsoft.
Codsigan, wuxuu ku abuuri doonaa gal kombayutarkeena, galka halkaas oo aan ka dooran karno faylasha iyo hagayaasha aan ku soo dejisan karno kombuyuutarkeena si aan ugu shaqeyno iyada oo aan dhammaan macluumaadka ku kaydsan kombuyuutarkeena.
El cabbirka ugu badan ee faylka in aan ku shubi karno goobtan waa 50 GB wakhtiga daabacaada maqaalkan, aad buu uga dambeeyaa marka loo eego OneDrive, oo cabbirkiisu ugu badnaan yahay 250 GB.
ICloud-ka Apple diyaar uma aha Android, tani waa barta ugu xun marka la eego iswaafajinta, inkastoo aan ka heli karno iCloud.com browserka webka.
Dropbox waa mid ka mid ah kuwan goobaha kaydinta daruuraha ugu da'da weyn ee suuqa. Dhab ahaantii, waxay ahayd shirkaddii ugu horreysay ee bilawday in ka badan toban sano ka hor si ay u bixiso adeegga noocaan ah.
Waqtigan xaadirka ah, is dhexgalka Google, Microsoft iyo Apple ee aaladahooda, isticmaalkeedu inta badan wuu faafay u dhexeeya shirkadaha waaweyn oo aan ka dhexayn shakhsiyaad.
Waxay na siisaa a codsiyada loogu talagalay Windows iyo macOS, iyo sidoo kale codsi loogu talagalay aaladaha IOS iyo Android. Habka hooyo, waxay na siisaa 2 GB ee kaydinta, meel bannaan oo aan gabi ahaanba waxba ku qaban karin.
Soo jiidashada ugu weyn ee Mega na siisaa waa 20 GB ee booska kaydinta daruuraha in ay na siiso oo laga heli karo dhammaan goobaha iyo nidaamyada hawlgalka ee suuqa.
Sida inta kale ee dhufto ee, waxa ay na bixisaa encryption-ilaa-dhamaadka marka lagu daro xaqiijinta laba-factor si looga hortago qof kasta oo aan la garanayn inuu galo xogtayada.
Marka aan wadaagno fayl, waxaan dejin karnaa oggolaanshaha isticmaalaha, ku dar ilaalinta erayga sirta ah oo deji taariikhaha dhicitaanka ee xiriirinta.
Ma jirto wax suurtagal ah wax ka beddel faylasha hab la wadaago, midna codsiga desktop-ka ama interface-ka shabakadda, kaas oo xaddidaya wax soo saarka isticmaalaha.
MEGA waa ikhtiyaar u fiican kuwa raadinaya si badbaado leh u soo bixi sawiro, muuqaalo iyo dukumeenti, laakiin uma baahna qurxin badan qaybaha kale.
Meesha kaydinta daruuraha ee MEGA ayaa sidoo kale laga heli karaa Windows iyo macOS, loogu talagalay Android iyo iOS.
Midkee ka jaban?
Haddii aan ku dhibtoonno si aan u hubinno qiimaha dhirta kaydinta kala duwan ee goobahan laga heli karo suuqa, waxaan arki karnaa sida qof kasta, gabi ahaanba qof kasta, waxay nagu soo bandhigaan qiime isku mid ah isla qorshayaasha kaydinta.
Tani fududeeyaa doorashada isticmaalayaasha, Mar haddii waxa kaliya ee ay tahay inaad sameyso ay tahay inaad doorato midka ku habboon baahiyahaaga isticmaal, nidaamka hawlgalka ee uu ku shaqeeyo, ku habboonaanta codsiyada ...
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka Windows » Software » Cloud » Adeegyada Kaydinta daruuraha ugu Fiican ee Daaqadaha
Xirfadlaha Soo-kabashada Xogta Stellar: waxa ay tahay iyo sida loo soo ceshado faylalkaaga tirtiray
Bots-yada ugu fiican ee Discord iyo waxa loogu talagalay